Somaliland: Dooda sharci ee ka dhalatay Xildhibaanka Qudha ee aan la dhaarin | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliland: Dooda sharci ee ka dhalatay Xildhibaanka Qudha ee aan la dhaarin
Somaliland: Dooda sharci ee ka dhalatay Xildhibaanka Qudha ee aan la dhaarin
Hargeysa-(Berberanews)-Dood sharci ayaa ka dhamalatay Cabdikariin Aadan Cali oo ka mid ahaa Xildhibaannada Xisbiga Kulmiye ka soo baxay balsr isagu dalka ka dhoofay intii aan la dhaarin Xildhibaannada Wakiillada Somaland.
Dooddan sharci ayaa timi ka dib markii Garyaqaan Yusuf Biixi oo ka mid ah qareennada Somaliland oo soo saaray aragti uu ku sallaynayo qodobo sharci oo uu ku difaacayo, isagoo ku dooday in Xildhibaankaasi aanu xaq sharci u lahayn ka mid noqoshada Xildhibaannada, sidaas darteedna Maxkamadda sare aanay dhaarin ee booskiisa uu xaq u leeyahay Xildhibaankii ku soo xigay xisbigiisa ee dhacay.
Haseyeeshee, Garyaqaanno kale ayaa iyaguna ka soo horjeestay aragtida sharci ee Garyaqaan Biixi, iyagoo midba dhan iska taagay.
Marka hore waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa aragtida Garyaqaan Yuusuf Biixi, oo soo dhigay degelkiisa Facebook, iyadoo dhammaystirana waxay u dhignayd sidan:
“Hal Xaaran ahi Nirig Xalaala Ma Dhasho!!! Xildhibaan Ckariin Aadan Cali oo kamid ahaa Musharaxiintii Gollaha wakiilada ka soo baxay Waxa Uu Ku Guuldaraystay Inuu Kamid Noqdo Xubnha Cusub Ee xildhibaanada Gollaha Wakiilada JSL Isagaana Marag Iskugu Filan argtidayda shaci.
Xildhibaanku isagaa Marag iskugu filan waxaanuu si khiyaamo ah ugu gafay Qodobada.9aad 67aad Ee Xeer Lr.91 Oo Sheegaya Qofkasta oo Musharax ahi inuu iska soo casilo shaqada uu Hayo muddo 90 cisho ah ka hor maalinta doorashada loo cayimay oo noqonaysa 3Bilood ka hor, haday tahay mid national ah iyo mid international ahba,
Waxa kale oo xusid mudan in sharcgu uu qabto qofka isla marka la ogaado ama ay cadaato inuu si khaldan oo khiyaamo (froud) uu ku helay hanti ama mansab xil iyo wixii lamid ah inuu sharcigu talaabo ka qaadayo isla wakhti la ogaado sanadaba ha noqotee.
Sidoo kale xildhibanku isaga oo ku hawlan khiyaamadii sharci ee uu galay xalkeedii waxa uu baal maray isla markaana uu ka baaqday shuruudihii dhaarta ee u xaqiijinasay in uu xildhibaan sharciya uu noqdo, si waafaqsan Qodobka.136aad Ee Xeer Lr.91 Xeerka Doorashooyinka guud ee golayaasha deeganka iyo wakiilada JSL.
Booskan waxaa sharci ahaan soo buuxinaya xubinta kusoo xigtay ee uu sharcigu u yaqaano (bakhtisugaha 1aad) ee ka midka ahaa gobolkii uu xidhibankani kasoo baxay, mudanihii liiska ugu soo xigay, Sidaas darteed cidkasta oo arintan sharci ay khusayso waxaan usoo jeedinayaa si sharcigu uu sareeyo si kuwa kadanbeyaa ay ugu wax qaataan loona ogaado inaan sharcigu cidna aanuu ku iloobin gafka uu gaystay. Waxaan usoo jeedinayaa siiba Gudoomiyaha maxkamada sare oo sharci ahaan awood uleh tafaasiisha sharciga isla markaana ah gudoomiyaha dhaarinaya xildhibaanada sidii uu ugu xaqiijinlahaa inay si rasmiya xidhibaano buuxa u naqan lahaayeen, in uu guto masuuliyada balaadhan ee sharci ee saaran waajibkeeda inuu ka guto isla markaana uu sharciga ku ilaaliyo si loo helo xildhiban ku haboon gollaha oo daacad ah sifo sharciyana ugu soo baxa kursiga xildhibaanka gollaha wakiiladda Somaliland. sidoo kale Xisbiga kulmiye iyo xildhibaanka liiskan kusoo xigay ee gobolka ay kawada sharaxnaayeena waxaa u taala inuu ku dacwoodo xuquuqdiisan sharci sifo sharciyana ugu gudbisto maxkamada sare madama xildhibaanku uu isagu marag iskugu filanyahay oo uu ku kacay khiyaamo sharciga baalmarsan isla markaana aanuu buuxin shuruudihii komishanku u eegayay musharaxa ee xeerku jideeyey kana been sheegay xogtiisa shaqaalenimo.”
Waxaa iyaguna ka falceliyay garyaqaanno iyo dad kale oo aqoon u leh arrimaha sharciga.
Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan “Aragtidaadan sharci gabi ahaanba waa khalad waana mid aan haysan qodob sharci oo khuseeya xildhibaankan aad durtay.
Qodobada aad cuskutayna waxay ku kooban yihiin SHAQAALAHA DAWLADA IYO CIIDAMADA kala duwan ee dawlada JSL o kaliya mana khuseeyaan shaqooyinka gaarka ah ee gudaha iyo dibada toona. Si waafaqsan qodobka aan hoos kuxusay.
Qodoka 41aad farqadiisa 7aad ee dastuurka iyo qodobka 67aad farqadiisa 7aad ee xeer lr 91 waxay weedho isku mid ah ku sheegayaan in aanay ubanaanayn QOFKA SHAQAALA DAWLADEED inuu isutaago doorashada Golaha wakiilada. Halka qodobka 9aad ee xeer lr91 uu sheegayo in shaqalaha dawlada iyo ciidamada ubanaanayn kaqaybgalka dorashada hadii aanay ruqsad shaqo ka tagis uso qoran hay,ada uu ka shaqeeyo mudo 90cisho kahor tarikhda dorashada”
Garyaqaan Jamaal Xuseen Mandela “Ma waxa uu qodobku sheegayaa shaqada dalka dibadiisa ah nooca ay doonto ha ahaatee in layska soo casilo.?
Jawabta Garyaqaan Yuusuf Biixi ee Mandela, “Garyaqaan Jamaal Hussein Mandeela muhiimada kowaad waa inaanad shaqaale dawladeed ahayn
ninkana shaqaale dawladeed ayuu ahaa manuu cadayn inuu isa soo casilay waxii tafsiir sharciyana maxkamadaa awood u leh. adiga iyo aniga midna siduu doono uma fasilikaro awooda tafsiirka sharci Gudomiyaha maxkamada saraa iska leh sharcigu muxuu uga jeedaa shaqaale dawladeed, sidoo kale xeerarka afsomali uun looma akhriyo garyaqaan ee macnaha uu qodobku xanbaarsanyahay ayaa muhiima in la fahmo mahadsanid garyaqaan.”
Maxamed Axmed Bacaluul “Horta in uu sharciyaqaanku dhiirigaliyo in Xildhibaan dacweeyo Yuusuf oo uu yidhaahdo xaq aad leedahay baa lagaa haystaaye soo kac, oo dadka la isku dhidhiyaa halkeebay anshaxa xirfadeed ee sharciyaqaanka kaga jirtaa?
Sharcigu mushkilad ma abuuro, balse waxbuu xalliyaa.”
Garyaqaan Yuusuf Biixi, ayaa u jawabay Bacaluul oo yidhi, “Qofkastoo muwaadin ah falfanbiyeed uu gaystay ama khiyaamo ha ahaado ama falkale ha ahaadee waxaa kuwaajib ah inuu lawadaago cida awooda uleh, aniguna ma ihi qareen qof u doodayee xal xaaran ah in aynu ka baadhno inay inoo dhasho nirig xaalaal ah ayaan diidanahay sxb thanks fikirkaagana waan soo dhawaynayaa.”
Doodan ayaa timi ka dib markii uu dalka dub ugu soo laabtay Xildhibaan Cabdikariin Aadan Cali oo uu sheegay inuu iska soo casilayay shaqo uu u hayay Hay’ad ka mid ah kuwa dowladda Ingiriiska.
Waxaan halkan idiinku soo gudbinayn waraysiga dooda dhaliyay ee lala yeeshay xildhibaanka oo dalka dub ugu soo laabtay.
Previous articleIkraan Tahliil: Taliyihii shaqada sirdoonka qoray oo ka hadlay ‘dilkeeda’
Next articleMasuul iska casilay xil Madaxweyne Biixi u magacaabay